Ubuntu 17.10 inowanikwa zvakare kurodha pasi | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 17.10 yave kuwanikwa zvekare kurodha pasi
Zvakanaka uye kutora iyo nguva, yekupedzisira sarudzo Canonical yaita zvakare kuti ISO yehurongwa hwayo hwekushandisa iwanikwe kune veruzhinji Ubuntu mune yazvino vhezheni yakagadzika iri 17.10, iyi nekuti mumazuva apfuura akange abvisa chinongedzo kubva kunzvimbo yake yekurodha pasi yeizvi.
Yese nyonganiso iyi yakakonzerwa nekuda kwekutadza kwaive nehurongwa uye nekukanganisa kuvimbika kwemamwe makomputa eLenovo akakuvara pakuisa Canonical system pamakomputa avo.
Asi kana iwe usina chawaiziva nezvazvo, rega ndimbopfupikisa nyaya yacho iwe. Kupfuura zvishoma masvondo mashoma apfuura (mukati memwedzi waZvita), timu ye Canonical yakaona chakakomba bug muUbuntu 17.10, iyo yakakanganisa kune mamodheru achangopfuura echiratidzo Lenovo uye mamwe mamodheru e ACER.
Mune yakanakisa kesi Iyi yakaona kukanganisa yakanganisa komputa panguva yekumisikidza izvo zvakakonzera kuti BIOS iuye yakashata, kudzivirira kuchengetedza shanduko dzekuchinja uye mune yakaipisisa kesi, kukanganisa uku kwakadzivirira iyo USB bhutsu yeedu Hardware tichisiya midziyo yedu seyepepaweight.
Asi Dambudziko iri ratogadziriswa uye kubva nhasi tinogona kuve nehurongwa zvakare kukwanisa kurodha pasi zvakananga kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Kana iwe uri mumwe weavo vakanganiswa, uchitsvaga pawebhu, Ini ndawana mhinduro, ndinofanira kukuudza kuti inoda ruzivo rwemberi, saka zviri kwauri kana iwe uchida kuita izvi.
Ini ndinokusiya iwe iyi link, uko mushandisi anotigovana isu mumaforamu eLenovo ekutsigira, mhinduro yeiyi Ubuntu 17.10 kutadza, iyo chinongedzo ndeichi.
Nekuita izvi, tinogona kudzorerazve iyo BIOS yekomputa yedu uye kudzosera shanduko dzakabata komputa.
Pasina zvimwe, kana iwe uchiziva chero imwe nzira, usazeze kugovana nesu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 17.10 yave kuwanikwa zvekare kurodha pasi
Ini ndakakwanisa kuzvigadzirisa nenzira iyi: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1734147 pane Lenovo. Pamwe mumwe munhu achadaro.
Zvakanaka, ini handioni chinongedzo…. Enda unonyengera….
Andres Lopez akadaro
Ini handisi kuwana chinongedzo futi, zvinowedzera kuti hazvikurudzirwe kurodha vhezheni 17.10 yelenovo, pane iro peji repamutemo. Slds
Pindura kuna Andrés Lopez
Mufananidzo mutsva hausati waburitswa, ndapota tarisa usati watumira.
Tarisa kana iwe uchikanganiswa neMeltdown uye Specter uye uzvidzivirire !!!